UHarry Hole ubuya ngo-2017-Inoveli entsha kunye nomdlalo bhanyabhanya | Uncwadi lwangoku
UHarry Hole ubuya ngo-2017 - iNoveli eNtsha kunye neMuvi
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Inoveli emnyama
Unyanisile. Isiselo esinxilisayo nesingalindelekanga kodwa esingaqhelekanga kuMhloli wamapolisa e-Oslo uHarry Hole, ibuya kwisihloko seshumi elinanye kuthotho lwayo oludumileyo. Ke ukuqala kwam kwi-Actualidad Literatura kwakufuneka ndibenaye, enye yezona ngxelo zibalaseleyo zohlobo endizithandayo: mnyama. Uyise, waseNorway Jo Nesbo, Uhlala engomnye wabantu abakhulu phakathi koonyana abaninzi baka-Odin abazinikele kuncwadi.
UHarry, isidalwa sakhe esinconywayo, wabandezeleka kwaye walandelwa ngamawaka abafundi abazinikeleyo nabanomdla (mna) ubuya kwinoveli entsha. Isihloko sakho, Unxano (Unxaniwe), iya kuthengiswa okwangoku kuphela kwimarike ye-Anglo-Saxon ngoMeyi 4, 2017. Abanye abafundi abangathethi isiNgesi, kuya kufuneka silinde ukubona ukuba ipapashwa nini iRandom House, abakhupha la manqaku. Kodwa okwangoku ngo-Okthobha siya kuba nohlengahlengiso lwefilimu Umntu weqhwa, isihloko sesixhenxe kwaye mhlawumbi sithandwa kakhulu kwaye siphumelele.
Ingaba ingantoni Unxano?
Nabani na oye wafunda iinoveli zangaphambili uya kwazi ukuba nini, phi kwaye njani samshiya uHarry Amapolisa, Okokugqibela. Ewe, kwakhona kukho omnye umbulali kwizitrato zaseOslo amaxhoba akhe angabasebenzisi benethiwekhi yokuthandana kwi-Intanethi iTinder. KuHarry the modus operandi kumkhumbuza umntu owayengomnye weemesis zakhe ngaphambili. Umfundi onamava ngokuqinisekileyo uya kukhumbula nokuba angabhekisa kubani na. Ke mhlawumbi uneakhawunti ezilindileyo ukuzinzisa elidlulileyo kunye nelangoku.
Ndizakuzama ukuyibamba ukuze ndikwazi ukuyijonga kwakhona. Isikhalazo endinaso sesokuba kusekho iincwadi ezindala zeNesbø ezisaseleyo. ayipapashwanga ngeSpanish, njenge Unyana, Igazi kwikhephu o Ilanga ezinzulwini zobusuku. Kodwa abanankwenkwezi nguMhloli we-Hole kwaye mhlawumbi kwiimarike zamazwe angakhange asebenze kakuhle. Siyavuma ukuba ziindlela zokupapasha ezinamalungelo okupapasha kwilizwe elihambelanayo. Nangona kunjalo, kusesehlazo kubafundi abathembekileyo balo mbhali. I-Nesbø ayirhintywanga nguHarry kuphela, kodwa ngohlobo lwayo, ingxelo yakhe eyoyikisayo kunye nezakhono zakhe zokukhohlisa. isidlele njengoko samkelwe.
Ngethamsanqa ndiye ndakwazi ukuzifunda kwaye ndiqhubeka ndikhupha umnqwazi emsebenzini wazo olungileyo. Kubo bonke abantu, nkqu abantwana (kubantwana abaphakathi kweminyaka eli-9 neli-12 ubudala), ezihlekisayo, ezentelekelelo, kwaye ezimnyama njengokubhala kwabantu abadala.
Ishelufu lam kubanda
Umntu weqhwa, Imuvi.
Ikhokelwe ngumlawuli waseSweden uTomas Alfredson kunye neenkwenkwezi kumlingisi waseJamani-eIreland Michael Fassbender. Iphambili yayo icwangciselwe 17 Oktobha ka-2017. IHollywood isemva kwaye kukho umlingisi owaziwayo kwilizwe liphela. Kodwa kukho impikiswano malunga nempumelelo yayo, ngakumbi kwiiwebhusayithi zeNordic kunye neeforamu, ezitshayela ikhaya, ngesizathu esivakalayo kwelinye icala.
Ngokujikeleze apha abanye abantu abathobekileyo abathandayo bajika amaxesha ngamaxesha ngokuchaseneyo, nokuba kumodareyitha. Besinabagqatswa abaninzi, kodwa sithathe into esele iyinyani. Uninzi lwethu luyavuma oko ngenxa yokungabikho kwe-physicist yombhali uHarry Hole (omde kakhulu, omhlophe kunye nenkqayi) Umnumzana Fassbender akabonakali efanelekileyo. Andizukubeka mfanekiso ukuze ndingafaki isimilo sayo. Nangona kunjalo, sizibophelele kwi-CV elungileyo yabo bathathe inxaxheba nakwimo yokuhlala kwikomkhulu laseNorway. Ke sigcina ukuthembana xa imveliso elungileyo izakuphuma.
Uhlengahlengiso lwefilimu yeenoveli ngumxholo ophindaphindiweyo kwaye ngokubanzi baphulukana nohlobo lwabo loncwadi, kodwa kukho ezinye izinto ezingafaniyo. Ndiyathemba ukuba le yenye ye gcina ibha kunye nomgangatho wabalinganiswa abakhulu kangaka, iyelenqe kunye nokuseta njengoko umyili wabo wayicebayo.
Unayo yonke into malunga noMnu Nesbø kwiwebhusayithi yakhe: UJo Nesbø.com (ngesiNgesi). Kwaye nakuFacebook nako siyi Uxhonywe kuJo Nesbø, apho sixoxa ngobomi kunye nemimangaliso ye-HH ethandwayo nezinye izidalwa zasemantla abandayo. Inqaku lokuqala linikezelwe kubo. Ngamaxesha amnandi iiVikings ebesinazo. Takk.
Ngapha koko, kuyonwabisa ukuqala la mava amatsha kwiActualidad Literatura. Abanye abafundi bangandazi kwezinye iincwadana zoncwadi. Eminye, Ndivulele umbuliso omkhulu kunye nethemba lokunxibelelana ngezihloko ezimnandi zokufunda nokubhala. Ndiza kuzama ukuzibala ngeyona ndlela ilungileyo nge-prism esemthethweni yeli qonga laziwayo kunye nelona lingaqhelekanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » UHarry Hole ubuya ngo-2017 - iNoveli eNtsha kunye neMuvi
Ndizichaza njengomntu "onomdla" kaMnu Nesbo kwaye ngakumbi ngoyena nyana wakhe amthandayo: UHarry Hole. Kwaye ndikhangele phambili kwinoveli yakho yamva nje. Enkosi kakhulu Mariola.Ndizakukulandela, Nesbo kunye nale bhlog ilunge kakhulu yoncwadi.
Enkosi kakhulu. Ndiyathemba ukuqhubeka nemibono elungileyo kwaye ukhona.
Siyazi ukuba u-HH akazukuhlala ngonaphakade, ukuba u-Nesbø ulungiselelwe isiphelo sakhe kwaye ukudibana naye akuyi kuba lula ukukhwela, kodwa asinamonde kule ncwadi intsha. Hayi, nceda. Omnye emva komnye kwaye baninzi.
Enkosi, Isabel. Apho ndiyakubala ukuba kuthatha ntoni.
UAracel-li Riera Ferrer sitsho
Kwaye kuthi abo bangasithethiyo isiNgesi okanye isiNorway, kuyathamsanqa kakhulu ukuba ukwazi ukufunda izishwankathelo zakho.
Amagqabantshintshi: ngenye imini ndabona imovie «Steve Jobs», eneenkwenkwezi uMnu. Fassbender ……. Khange ndikwazi nokuzama konke okusemandleni am ukubona uHarry Hole wethu …… .. Xa unenkcazo entle yomlinganiswa kunzima (ubuncinci kum) ukumdibanisa nomntu ongenalo nolunye uphawu olwaziwayo .
Phendula uAracel-li Riera Ferrer
Ndingakuxelela ntoni, Araceli? Uyalwazi uluvo lwam malunga nalo. Kodwa kunjalo, masibone ukuba yintoni ephumayo.
UMaria del Carmen Ruiz de las Ruiz de las Ruiz de las Heras Velez sitsho
NGOKUGQITHISILEYO KWIMIMANDLA EHARRY Nceda ……
Phendula uMaría del Carmen Ruiz de las Ruiz de las Ruiz de las Heras Velez
UMaria del Carmen Ruiz de las Heras Velez sitsho
NGOKUGQITHISILEYO KWIMIMBI EHARRY Nceda …… ..
Phendula uMaría del Carmen Ruiz de las Heras Velez
Ngaba uyafuna ukuba ngumbhali? Landela ezi ngcebiso zivela kwi-Umberto Eco